Soo dejisan GeoGebra 5.0.284 – Vessoft
Soo dejisan GeoGebra
GeoGebra – software ah oo ay la socdaan caalamiga ah ee sifooyinka for design joomateri buuxda. Muuqaaladan ugu weyn ee software ay yihiin howlaha la korontoda duwo, hawlaha tirakoobka ama xisaabta, miisaska, iwm GeoGebra u saamaxaaya in ay xisaabiyaan Cidhibta isleegyo ama dhibcood ee extremum oo la shaqeeya derivatives iyo integrals hawlaha. Software waxa ku jira qalab badan oo ay ku configurate dhaqanka habboon oo ka mid ah hawl-xisaabeed. Sidoo kale GeoGebra ah waxaa suuro gal ah in ay sawiro 2D iyo 3D shaqeeyaan.
La shaqaynta hawlaha tirakoobka iyo xisaabta
La shaqaynta garaafyo 2D iyo 3D
Comments on GeoGebra:
GeoGebra Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Scratch 450.1
العربية, English, Українська, Français... Dia 0.97.2
English, Français, Español, Deutsch... Google Drive 1.23.9648.8824
Files Agabka in la xogta ka daruur kaydinta adeegga Google shaqeeyaan. software wuxuu hubinayaa xawaaraha sare iyo wax soo saarka shaqada la files.
Chat Tool inay ku wada xiriiraan dunida oo 3D dalwaddii. Software wuxuu isticmaalaa jilayaasha 3D si aad u hesho aqoon u leh dadka isticmaala ku.
English, Français, Español, Deutsch... DriverMax 8.33
Wadayaasha qalab ee loading degdeg ah oo hufan ee darawallada. software The lafaguraa xogta faahfaahsan oo ku saabsan qalabka iyo bandhigayaa darawallada loo baahan yahay.